အဘယ်အရာကိုအစိမ်းရောင်မီးထက်အေးဖြစ်နိုင်မည်နည်း အဖြေ: ဖြစ်ကောင်းဘာမျှမ! ဤသည်အစိမ်းရောင်မီးသို့မဟုတ်မီးလျှံပါဝင်ကြောင်းစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်မီးစေရန်လွယ်ကူသည်နှင့်မဆိုခက်-to-ရှာတွေ့ဓာတုပစ္စည်းများမလိုအပ်ပါဘူး။ အန်း Helmenstine
ဤသူကားငါ၏မူရင်းအစိမ်းရောင်မီးသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမီးလျှံ, အစိမ်းထုတ်လုပ်ရန်ရိုးရှင်းပြီးကြာရှည်ခံတောက်ပပန်းသီးဖြစ်ကြသည်။ နောက်ထပ် "
ဒေါက်တာ Helmenstine က boric acid ကိုသုံးပြီးအစိမ်းရောင်မီးလုပ်သည်မည်မျှလွယ်ကူသောပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ boron တစ်ဝိသေသအစိမ်းရောင်ထုတ်လွှတ်ရောင်စဉ်ရှိပါတယ်။ အန်း Helmenstine
သင်ပြုအတိအကျဘာကိုပြသခံရဖို့ပိုနှစ်သက်ပါလျှင်, သင်တို့ကိုငါဖုံးလွှမ်းတယ်ပါတယ်။ ဤတွင်အစိမ်းရောင်မီးလုပ်ဘို့ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။
ကြေးနီ sulfate အစိမ်းရောင်လှုပျရှားအုံ
ဤရွေ့ကားအစိမ်းရောင်မီးတောက်ကြေးနီ sulfate အရက်ကိုမီးရှို့ဖို့ကဆက်ပြောသည်သောအခါစိတ်လှုပ်ရှားကြေးနီအိုင်းယွန်းများ၏ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အန်း Helmenstine
ဒါကြောင့်တစ်ဦးပိုးသတ်ဆေးမှုန့်သို့မဟုတ် roach လူသတ်သမားအဖြစ်နေရာအများအပြားအတွက်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နဲ့အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်ကတည်းကငါများသောအားဖြင့်, အစိမ်းမီးလုပ် borax သို့မဟုတ် boric acid ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့သျောလညျး, ကြေးနီအိုင်းယွန်းလည်းအစိမ်းရောင်အလင်းထုတ်လွှတ်မှု။ ဤသည်အစိမ်းရောင်မီးစေရန်အခြားစူပါလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဂျယ်လောင်စာဆီနှင့်အတူကြေးနီ sulfate ကိုသုံးပါလျှင်, သင်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့ကြာရှည်ခံစေတဲ့အစိမ်းရောင်အလျှံရရှိနိုင်သည်။ နောက်ထပ် "
ဒီအပေါက်-o-မီးအိမ်အစိမ်းရောင်မီးဖြင့်အတွင်းကနေ lit ဖြစ်ပါတယ်။ အန်း Helmenstine
အစိမ်းရောင်မီးလုံးကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်းတစ်ဦးအေးမြဟယ်လို jack ကို-o-မီးအိမ်စေသည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုမျက်စိ-ဖမ်းဖြစ်ပါသည်, သငျသညျမထငျသလဲ? နောက်ထပ် "
ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်မီးလေဆင်နှာမောင်းသို့မဟုတ်မီးလေပြင်းစေရန်လွယ်ကူသည်။ မီးတောက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအစိမ်းရောင်ကိုဖွင့်ဖို့ boric acid ကို, borax သို့မဟုတ်ကြေးနီ sulfate တစ်နည်းနည်းထည့်ပါ။ အန်း Helmenstine
ဤသူသည်ငါမီးအစိမ်းရောင်ရောင်စုံ မှလွဲ. လေဆင်နှာမောင်းနှင့်မီးလေဘွေ, ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြသတဲ့ tabletop မီးစီမံကိန်းကိုပါ! ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျမီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုအရောင်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
အစိမ်းရောင်မီးသတ်ရေမှုံရေမွှား Bottle သ
သည် "Breaking Bad" လေယာဉ်မှူး episoode ခုနှစ်တွင်ဝေါ့တစ်မှုန်ရေမွှားပုလင်းထဲကနေဓာတုပစ္စည်းနဲ့ bunsen burner လျှံ sprays နှင့်မီးလျှံကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုပြန်သွားလေ၏။ AMC
အရောင်မီးထုတ်လုပ်ရန်တစ် burner လျှံသို့ဓာတု Spritz! ဟုတ်ကဲ့, သင်ရုံပျော်စရာအဘို့ဤလုပ်နိုင်ပေမယ့်ဒီပရောဂျက်အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးဓာတုဗေဒသရုပ်ပြကဲ့သို့ဖြစ်၏, ကျောင်းသားအာရုံကိုဖမ်းယူဖို့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများကိုရှင်းပြရန်။ နောက်ထပ် "
ကအစိမ်းရောင်မီးလျှံနှင့်အတူတစ်ဦး pinecone မီးလောင်စေရန်ကြာအားလုံးသည်ကြောင့်ပေါ်သို့အနည်းငယ် boric acid ကိုဖြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အန်း Helmenstine
ကိုယ့်အကြောင်းကိုမီးလောင်လွယ်ဘာမှအစိမ်းရောင်မီးလျှံနှင့်အတူမီးရှို့ဖို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာမီးရှို့တစ်ခုသို့မဟုတ်ပွဲလမ်းသဘင်ထိတွေ့များအတွက်မီးပုံသို့မဟုတ်မီးဖိုမှ add နိုင်သည့် pinecones, ပါဝင်သည်။ နောက်ထပ် "
တစ်ဦး LDS (Mormonism) တို့မစ်ရှင်များအတွက်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ရန်
အမေရိကန် Beaver အဘိဓါန်
Tours မှ၏စိန့်မာတင် (မြင်း၏နာယကစိန့်) ကိုအဘယ်သူခဲ့သလား
ဘယ်လိုဂရိသူရဲကောင်းဟာကြူလီ Die ခဲ့သလား
1800 ၏သဘာဝလွန်နှင့် Spooky ပွဲများ
ပြင်သစ် Pirate Françoisသည် L'Olonnais ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
တစ်ဦးက New Reader ကိုချော့မော့ဖို့ငါးအကောင်းဆုံး Spider-Man ရုပ်ပြစာအုပ်များ
အတိတ်မှ Subjunctive ကဘာလဲ?
ဘာသာစကားများနှင့် Grammar အကြောင်း6အဖြစ်များသည့်ဒဏ္ဍာရီ